अबको एक वर्षभित्रमा सबै वडामा विद्युत पु¥याउँछौँ ः घर्ती – Nepalpostkhabar
Hemant KC । ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:२० मा प्रकाशित
भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती जाजरकोटका आशालाग्दा युवा नेता हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चार हजार दुई सय ९२ मत ल्याएर जनताका प्रिय नेताका रुपमा उदाएका घर्तीले नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा नगरले गरेका विकास निर्माणका के–के काम भए ? नगरपालिकालाई कसरी आर्थिक समृद्धिका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ ? लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर नगरप्रमुख घर्तीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
हिजोआज के काममा व्यस्थ हुनुहुन्छ ?
म हिजोआज नगरपालिकाको काममा व्यस्त छु । सिँगो नगरपालिका ध्यान कोरोना महामारीबाट जनतालाई कसरी बचाउनमा केन्द्रित छ । लकडाउन केही खुकुलो भएपनि अवस्था सहज भएको छैन । म पनि कोरोना नियन्त्रणकै अभियानमा व्यस्त छु ।
तपाईले निर्वाचित भइसकेपछि हालसम्म के–के गर्नुभयो ?
म निर्वाचित भएपछि भेरी नगरपालिकालाई विकास निर्माणका हरेक हिसावले अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु । प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी नगरपालिका सबै (१३ वडा) मा सडक सञ्जाल पुगेको छ । नगरपालिकाई उज्यालो बनाउने अभियान अन्तरगत सबै वडाहरुमा विद्युतका पोलहरु गाडेको छ । अबको एक वर्षभित्रमा सबै वडामा विद्युत (केन्द्रीय प्रशारण लाइन) पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । सबै वडाहरुमा मुहान संरक्ष्ण गरेर नागरिहरुलाइ शुद्ध खानेपानी पु¥याउने पु¥याएका छाँै । भेरी नगरपालिका वडा नं. १३ को कुदु र वडा नं. १० को भुरचौर क्षेत्रमा डिप बोरिङ प्रणालीमार्फत केही खानेपानीको आपूर्ति गर्ने प्रयास गरेका छौँ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर नगरमा ठूलो मात्राको बजेट पार्न सफल भएका छौं । पुराना र अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरु पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयमा दरबन्दी समायोजन, आवश्यकता परेको ठाउँमा विद्यालय मर्ज गरेका छौं । नागरिकलाई सेवा प्रभावलाई छिटो र छरितो बनाउन सबै वडाहरुमा कर्मचारी पठाएका छौं । समग्रमा भन्दा म निर्वाचित भएपछि नगरपालिकाको समग्र विकासले फड्को मारेको छ ।
तपाइको नजरमा भेरी नगरपालिकाका आर्थिक समृद्धिका आधारहरु के–के हुन् ?
भेरी नगरपालिका जाजरकोट जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका हो । तर यहाँ नागरिकको गरिवी निकै दयनिय छ । यहाँका अधिकाँश नागरिकहरु गरिवीको रेखामूनि छन् । भेरी नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिका आधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो । यहाँको गरिवी अन्त्य गर्नको लागि आधुनिक कृषिमा प्रर्णालीमा जोड दिएका छौं । एक वडा एक बिशेष कृषि उत्पादन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छौँ । मह, ओखर, टिमुर र गहँु उत्पादनको पकेट क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाएका हुन ।
यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले के–कस्तो योजना बनाएको छ ?
भेरी नगरपालिकामा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरु छन् । जसमध्ये जाजरकोट दरवार सबैभन्दा चर्चित र मुख्य पर्यटकीय स्थल हो । यसलाई अझ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ माष्टर प्लान बनाउन लागेका छौँ । धार्मिक महत्वको बढामालिकालाई विकासका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । जहाँ उपभोक्ता समितिमार्फत भएका छन् । अहिले त्यहाँको विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । नगरपालिकाको जगतिशेन महाराजको दरबार निर्माण गर्ने चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै सान्टागुफा, शिव मन्दिर, भूमेश्वरगुफा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचारप्रशारमा बिशेष जोड दिएका छौं ।
तपाई नगरपालिकाको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
काम गर्दै जाँदा बाहिरबाट अभिमत राख्न जति सहज छ त्यसको कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो छ । मेरो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा बिभिन्न चुनौतिको बिचमा काम गर्दै आएको छु । तीन वर्षको अवधिमा कानून निर्माणदेखि विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । शुन्य बिन्दुबाट काम गर्नुपर्दाका जटिलतालाई चिर्दै विकास निर्माणलाई गति लिएका छन् । समग्रमा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन सन्तोशजनक नै छ ।
जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्न ईच्छानुसार योजना बनाउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?
जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि योजना बनाउछन् भन्ने कुरा सरासर गलत छ । तर सयौँको भीडमा एक÷दुइ जना व्यक्तिमा भ्रष्टाचारको संका गर्ने ठाउँ हुनसक्छ । हिजोआज उपभोक्ता समिति बस्नको लागि मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका योजनाहरु दीगो छैनन् । उपभोक्ता समितिमा बसेपछि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने एक प्रकारका नागरिकहरुको सञ्जाल नै छ । केही विकासे योजनाहरुमा केही जनप्रतिनिधिहरु प्रभावित भएको पाहिन्छ । कार्यपालिका बैठक, नगरसभामा पनि यस्ता विषयहरु आउने गरेका छन् । तर भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जनप्रतिनिधिले इच्छा अनुसार योजना बनाउँछन् भन्ने कुरा गलत छ ।
बहुप्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रकरणमा ठूलो घोटाला गुनासो छ नि ?
जग्गा खरिद प्रकरणमा कुनै घोटाला भएको छैन । तर केही स्वार्थ समूहले यस्तो आरोप लगाएका छन् । जुन आरोप मात्रै हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएको रिस फेर्न केही साथीहरुले हल्ला मच्चाउने काम मात्रै गरेका हुन् । चोकचोकमा अरुका कुरा काटेर खान पचाउने जमातहरुको कमी छैन । बहुप्राविधिक शिक्षालयको जग्गाग खरिद प्रक्रियामा घोटाला भयो भन्ने प्रमाण पेश गर्न खुल्ला चुनौति दिन्छु । जग्गा खरिदका लागि नगरपालिकाको ४० लाख बिनियोजन गरेको छ । जुन नगरपालिकाको क्याबिनेटले गरेको निर्णय गरेको कुरा हो । विशेष गरी जाजरकोटका गरिव, निमूला र विपन्न विद्यार्थी भाइबहिनीलाई आफ्नै गाउँमा प्राविधिक शिक्षा हाँसिल गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । हामीले जाजरकोट जिल्लाकै लागि कोटा निर्धारण गरेका छौँ । तर कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न अथाव पैसा कमाउन शिक्षालय स्थापना गरिएको हैन । जहाँसम्म जग्गा घोटालको कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । हामिले ४० लाख बजेट बिनियोजन गरेका थियौँ । जग्गा धनिहरुले जग्गा दिन्छु भनेका थिए । जग्गा लिनको लागि हामीले बिभिन्न प्रकृयाहरु चाल्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निणय गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मुआब्जा बितरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५६ लाखको मुआब्जा निर्धाण भएको छ । नगरपालिकाले ४० लाख मात्र बिनियोजन गरिएको थियो । अन्ततः १६ लाख रकम अभाव भयो । हामीले ५६ लाखमध्ये ४० रकम उपलब्ध गराउदा कहमनिर अनियमित्ता भयो । यदि योभन्दा बढि मूल्य तिरेको भए त्यो भ्रष्टचार हुन्छ ।
अन्तमा के भन्नु हुन्छ ?
सम्पूर्ण नगरवासीलाई नयाँ उर्जा हौसलाका साथ निर्माणाको अभियानमा जुटन सबै नगरवासीलाई हार्दिक आवह्वान गर्दद्धु । आफ्ना गाउँ–गााउँमा भएका विकास निर्माणलाई दिगो र पदर्शी बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।